Agcine evuliwe amanzi eGeorgetown | News24
Agcine evuliwe amanzi eGeorgetown
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaIsikole samabanga aphakeme i-Georgetown ebesivalelwe amanzi.
UKUFUNDA sekubuyele esimeni esejwayelekile esikoleni samabanga aphakeme iGeorgetown kulandela ukuvalelwa amanzi umasipala uMsunduzi ngoba uthi isikole sikweleta imali elinganiselwa ku-R2 million.
Lesi sikole sivule singenawo amanzi nokube sekuphoqa ukuthi abafundi baphindele emakhaya kungakashayi isikhathi sokuphuma kwesikole. Ngesonto eledlule uMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal ube nezingxoxo nomasipala uMsunduzi ngesonto eledlule, base bevumelana ngokuthi amanzi avulwe kulesi sikole.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnu Muzi Mahlambi ukuqinisekisile ukuthi ngempela amanzi asevuliwe uthe umnyango uzophinde ube nomunye umhlangano nomasipala kuleli sonto ukubheka ukuthi lesi sikweletu singakhokhwa kanjani.
Ngesonto eledlule umasipala uMsunduzi wakhipha isitatimende esiqinisekisayo ukuthi ngempela lesi sikole sikweleta imali elinganiselwa ku-R2 million. Saphinda saveza nokuthi lesi sikole sagcina ukukhokha kamasipala ngenyanga kaMbasa (April) 2019.
Sithe umasipala ubulokhu uzama ukuxoxisana nesikole ukuthi size phambili senze izinhlelo zokuthi sizokhokha kanjani.
Incwadi yokugcina eyathunyelwa kulesi sikole bekuyinyanga kaLwezi ( November) kodwa isikole asizange size siphendule.
Abafundi bakulesi sikole bebephuma ngo-11am zonke izinsuku seloku bevulile, kodwa manje isimo sesibuyele kwesejwayelekile.
Amanzi avulwe ngoLwesihlanu mhla zingama-24 kuMasingana (January).